7 aghụghọ iji nweta ọtụtụ n'ime Spotify | Akụkọ akụrụngwa
Spotify Ọ bụ taa otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu iji nwee ike ịnụ ụtọ egwu egwu, ma ọ bụ n'efu ma ọ bụ site na nsụgharị akwụ ụgwọ ya, nke ọtụtụ ndị ọrụ nwegoro. Ngwa a na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya hụrụ ndị asọmpi na-anwa izuru ndị ọrụ ya, mana ka ọ dị ugbu a Apple Music ma ọ bụ Tidal enwetala ihe ịga nke ọma, mana ugbu a ha ka dị afọ ole na ole.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-eji Spotify kwa ụbọchị na ọ bụ ya mere taa anyị chọrọ igosi gị ụfọdụ aghụghọ na atụmatụ iji nweta ọtụtụ ngwa a. Ọ bụrụ n ’ịbụ otu n’ime ndị bidoro iji ngwa egwu a na - agagharị agagharị ụbọchị ole na ole gara aga, maọbụ ọ bụrụ na ị na - eji ya oge 7 Spotify aghụghọ maka ndị ọkachamara ma ọ bụ Newbies, ha ga-enyere gị aka nke ukwuu.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, Spotify nwere ike iji maka n'efu, ọ bụ ezie na enwere mmachi ụfọdụ na onye ọzọ maka ịkwụ ụgwọ, nke ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwu ahụ na enweghị ụdị mkpọsa mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ chekwaa egwu niile anyị masịrị ịnweta ya na-enweghị njikọ. N'ezie, maka nke a, ọ dị mkpa ịnwe ngwaọrụ mkpanaka nwere nnukwu nchekwa dị n'ime ebe ọ bụ na, dịka ọmụmaatụ, yana 16 GB iPhone arụ ọrụ a enweghị oke.
Tupu anyị amalite, anyị ga-enye gị njikọ njikọ Spotify maka iOS na ngwaọrụ gam akporo ọ bụrụ na ịchọtabeghị Spotify, yabụ ị nwere ike ime ya ozugbo enwere ike;
1 Mmekọrịta dị n'etiti Shazam na Spotify ga-ekwe omume
2 Dowe listi ọkpụkpọ anyị ka ọ ghara ịdaba n'anya anyị
3 Mee akaụntụ gị ka ọ bụrụ nkeonwe
4 Mepee Spotify na Ok Google!
5 Gee egwu ọ bụla ọzọ
6 Jiri isiokwu iji mee nyocha kpọmkwem
7 Kekọrịta listi ọkpụkpọ ma mee ka ha tolite site na enyemaka nke ndị enyi gị
Mmekọrịta dị n'etiti Shazam na Spotify ga-ekwe omume
Enweghị ndị ọrụ ole na ole na-eji ngwa ahụ Shazam nwee ike ịmata ihe egwu na-akụ ebe ọ bụla. N'ezie, enwere ole na ole ndị maara na ngwa abụọ ahụ nwere ike inwe ezigbo mmekọrịta. Ma nke ahụ bụ Onye ọ bụla nwere ike jikọta akaụntụ nke ma ngwa ike a playlist na Spotify na niile songs na anyị bụ szhazameando.
Iji mezuo ọrụ a, nke yiri ka ọ dị oke mgbagwoju anya, naanị anyị ga-aga "Ntọala" ngalaba nke ngwa Shazam gị wee pịa nhọrọ "Jikọọ na Spotify". Na nke a, akụkọ abụọ ahụ ga-esonye na mmekọrịta mara mma ma na-amị mkpụrụ nke ga-eme ka anyị nwee egwu niile anyị na-achọpụta na Shazam na ndepụta egwu Spotify.
Dowe listi ọkpụkpọ anyị ka ọ ghara ịdaba n'anya anyị
Spotify na-enye anyị ohere ịmepụta ndepụta nke egwu ma ọ bụ listi ọkpụkpọ nke enwere ike ịkekọrịta ya na onye ọrụ ọ bụla nke ngwa ahụ. Nke a bụ nnukwu uru ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịgbaziri ndepụta ọkpụkpọ ndị ọrụ ndị ọzọ iji nwee ọ enjoyụ ruo nwa oge, mana ọ dịkwa oke egwu.
Ọ bụrụ n’inwere ihe ụtọ dị egwu dị iche, ịhapụ listi ọkpụkpọ gị n’anya onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịdọnye gị na nsogbu. Maka ihe a niile, anyị ga - akwado ka ị zoo ụdị egwu ọkpụkpọ gị niile. Iji mee nke a ị ga-aga na ndepụta nke songs na ị chọrọ zoo, na site na nhazi nhọrọ ị kwesịrị ị họrọ nhọrọ "Mee nzuzo".
Mee akaụntụ gị ka ọ bụrụ nkeonwe
Ọ bụrụ n ’ọ bụghị naanị na ịchọrọ ịmebe listi ọkpụkpọ gị pụọ n’aka ndị ọzọ, ị nwere nhọrọ nke mee ka akaụntụ gị niile bụrụ nkeonwe. Na nke a ị ga-enwe ike ige ma ọ bụ soro onye ọ bụla na-ese ihe na-enweghị onye ọ bụla so n’ezinaụlọ, enyi ma ọ bụ onye ọrụ ibe gị nwere ike ịchọpụta ma chịa gị ọchị.
Ndabere nke arụmọrụ Spotify a bụ na ọ ga-arụ ọrụ naanị awa isii. Iji nwee ike ịghara ịhụ n'oge ahụ, naanị ị ga-aga ngalaba Ntọala ma rụọ ọrụ nhọrọ "Oge Onwe".
Mepee Spotify na Ok Google!
Onye enyemaka nke mebere Google na-eme ka anyị nwekwuo ọnụọgụ nhọrọ, n'etiti nke anyị nwere ike ịhapụ ịhapụ inwe ike ịmepe Spotify ma ọ bụ kpọọ egwu ọ bụla. Echefula na maka nhọrọ a iji rụọ ọrụ ị ga-arụrịrị ọrụ ahụ "Ok google", hazie asụsụ ahụ n'ụzọ ziri ezi ma rụọkwa ọrụ a Google Ugbu a site na ihuenyo ọ bụla nke ngwaọrụ anyị.
Site ugbu a gaa n'ihu, naanị site n'ikwu "Ok Google" na iziga onye enyemaka Google na-emeghe Spotify anyị ga-enwe ngwa ahụ meghere na-enweghị imetụ ekwentị anyị aka, dịka ọmụmaatụ. Na egwu na-ada site na ịgwa ya Google Ugbu a dịịrị gị dabere na mmasị gị.
Gee egwu ọ bụla ọzọ
Spotify zuru oke ige egwu na-enweghị nkwụsị, ụdị ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ adịchaghị na-enweghị mmachi ọ bụla. Ọ na-enyekwa anyị ohere ịnweta akụkọ ntolite nke ihe niile anyị nụrụ na, dịka ọmụmaatụ, na-enyere anyị aka ige ntị ọzọ na abụ ahụ pụrụ iche ị masịrị gị ụbọchị gara aga ma ugbu a ị naghị echeta aha ya.
Ọ bụrụ na i lee anya na mkpugharị mmanya na aka ekpe ị ga-ahụ "Kpoo kwụ n'ahịrị", nke Ọ bụghị naanị na ị ga-enwe ike ịhụ egwu ị nọ na mmemme iji gee ntị, kamakwa anyị ga-elele egwu ọ bụla anyị nụrụ. Site n'otu ngalaba a ka anyị nwere ike ịkọgharị egwu ọ bụla anyị nụrụla.
Jiri isiokwu iji mee nyocha kpọmkwem
Ihe aghụghọ anyị ga - egosi gị n'okpuru malitere ma enwere ike iji ya na desktọọpụ nke Spotify, mana ugbu a enwere ike iji ya na ụdị maka ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba.
Ọ mejupụtara isiokwu iji mee nchọpụta ụfọdụ dịka usoro ị jiri. Offọdụ n'ime isiokwu ndị a bụ ndị na-esonụ;
genre (okike): ma ọ bụrụ na ịchọrọ ige ntị na ụdị egwu akọwapụtara
afọ (afọ): na-enye anyị ohere ịchọ egwu site na otu afọ
album (album): ịchọta egwu sitere na ọba egwu na-amasị anyị ige ntị
Enwere ike ijikọ mkpụrụ okwu abụọ na-enweghị nsogbu ịchọta, dịka ọmụmaatụ, egwu nke otu ụdị afọ nke anyị chọrọ
Kekọrịta listi ọkpụkpọ ma mee ka ha tolite site na enyemaka nke ndị enyi gị
Otu n'ime nnukwu nhọrọ Spotify na-enye anyị bụ inwe ike ịkekọrịta listi ọkpụkpọ anyị na ndị enyi anyị ma ọ bụ ezinụlọ anyị. Ọ dịịrị nnwere onwe anyị na anyị na ha na-ekerịta ma ọ bụ na anyị na-ekwe ka ha tinye egwu iji mee ka ndepụta ọkpụkpọ ahụ buru ibu ma karịa ihe niile ka mma.
Site na listi ọkpụkpọ ọ bụla anyị ga-enwe nhọrọ nke "Ekekọrịta" dị, ịnwe ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ kọntaktị ahụ onye anyị ga-ekekọrịta ndepụta ọkpụkpọ anyị iji nwee ike idezi ya ma ọ bụ. Achọpụtara nhọrọ ikpeazụ a site na ịgbalite nhọrọ "Ndekọ Njikọ Aka".
Njikere ịmalite inweta ihe kachasị na Spotify na usoro ndị a?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Usoro 7 iji nweta ọtụtụ ihe na Spotify